Ciidamada Kenya ee KDF oo dad iyo xoolo ku xasuuqay meel u dhow xadka labada dal | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ciidamada Kenya ee KDF oo dad iyo xoolo ku xasuuqay meel u...
Ciidamada Kenya ee KDF oo dad iyo xoolo ku xasuuqay meel u dhow xadka labada dal
(Raaskiyambooni) 18 Okt 2021 – Wararka ka imanaya Gobolka Jubbada Hoose ayaa tibaaxaya in maanta ay halkaa tacaddiyo ka gaysteen Ciidamada Kenya oo halkaa ku laayey dad shacab ah, gaar ahaan dad xoolo raacato ah oo ku dhaqan Raaskiyambooni.
Ciidamada KDF ee ka tirsan AMISOM oo ay uga mid yihiin si uu muran ku jiro marka hab-dhaqankooda la eego, ayaa halkaa ku diley dad laga xusay Carab Qoriyow oo ka mid ahaa dadka degaanka, waxaa kale oo halkaa ku dhaawacmay dhowr qofood.
Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale lagu warramayaa inay laayeen xoolo lo’ ahaa oo kor dhaafaya ilaa 50meeyo neef oo ay wateen dadka ay toogteen, iyadoo aan sababta la ogayn, balse wararka qaarkood ay sheegayaan in qarax lala beegsaday kahor falkan.
Dadka degaanka ah ee ay dhibaatadu soo gaartey ayaa baaq u diray DF Somalia iyo Maamulka Jubaland..
Ciidamada Kenya oo iskugu jira kuwa AMISOM iyo kuwa aan xitaa ka tirsanayn ayaa tacaddiyo badan ka gaysta Gobolka Jubaland guud ahaanba, gaar ahaan Gedo, balse waxaa inta badan ka gaabsada DF Somalia, halka aysan marna ka hadal kuwa Jubaland.
Previous articleQIIMAYN: 20-kii heshiis ee suuqa kala iibsiga xagaagan ugu fiicnaa oo lasoo saaray
Next article7-su’aalood oo ay tahay inay Soomaalidu is waydiiso halkii ay u dabbaaldegi lahaayeen go’aanka Maxkamadda ICJ